अन्जालि अधिकारीको प्रेमी ब्रिटिस्ट लाहुरे। - नौलो धुन
अन्जालि अधिकारीको प्रेमी ब्रिटिस्ट लाहुरे।
३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १३:२१ मा प्रकाशित (७ महिना अघि) २६५२ पाठक संख्या
बिगत लामो समय देखि गित संगीत छेत्र मा प्रवेश गरेकी मोडल अन्जली अधिकारि अहिले पनि उत्तिकै चर्चामा छिन। धेरै दर्शकहरुको नजरमा पर्न सफल मोडलको रुपमा लिन सक्छौ। अझ भन्ने हो भने मोडल अन्जलिलाइ बोल माया , गलबन्दी को मोडल भनेर चिन्ने गर्दछन दर्शकहरु। उनको सरलता , उनको बोल्ने शैली देखि हरेक क्रियाकलापहरु असाध्यै युक्तपुर्ण छन्। गित अनुसार भावानामा डुबेर अभिनय गर्ने गर्छिन अन्जली। उनको मिडिया अन्तरबार्ता धेरै देखिदैन किन कि उनि काम मा मात्र व्यस्त हुने गर्छिन। धेरै जसो उनि नाच्ने खालको गीतमा अभिनय गर्छिन।
एभरेस्ट नेपाल नामक युटुब च्यानल मार्फत अन्जली अधिकारीको अन्तरबार्ता सार्बजनिक भयको रहेछ। उक्त अन्तरबार्ता आज भन्दा ११ महना अघि युटुबमा अपलोड गरियको रहेछ। उक्त अन्तरबार्तामा उनले भनेकी छिन उनको प्रेमी ब्रिटिस्ट लाहुरे रहेको बतायाकी छिन। उनले आफ्नो प्रेमको नम्बर खुलायाकी छैनिन। पहिला उनि १० मा पढ्दा पढ्दै प्रेममा परेकी थिइन् भने दुइ बर्ष पछि उक्त प्रेमी संग्ग छुटेको बताउछिन। अहिले भने उनको प्रेमी ब्रिटिस्ट लाहुरे रहेओ बतायाकी छिन। गित संगीत छेत्र भित्र कुनै पनि नभयको बताउछिन।
उनलाई धेरै जसो मानिसहरुले नकारात्मक कमेनट हरु गर्ने गर्दछन त्यसमा उनलाई निकै पिडा हुने बतायाकी छिन। उनको बाल्यकाल पनि निकै रमाइलो तरिकाले बितेको बताउछिन। स्कुलमा धेरै चोटि कुखुरा बनेको त्यो छेण सम्झिदा अहिले पनि हासो लाग्छ बताउछिन। केहि बर्ष भित्रै बिहे गर्ने तयारि मा छिन अन्जली अधिकारि। बाकिको अंश भिडियो ब्बाटै हेर्नुहोस।
कल्पना दाहाल तिहारको दिन आमा सहित मीडियामा, दाजु भाई नै गुमाउनुको पीड़ाले रोएरै सकियो अन्तरबार्ता-भिडियो हेर्नुहोस
“कार्यसम्पादनमा सर्वोत्कृष्ट ल्याउने मन्त्रीलाई हटाउने र फेल हुनेहरुलाई बोक्नेहरुले एकदिन पछुताउने छन्”-लालबाबु पण्डित
बिष्णु माझी संग दोहोरी खेलेर हिड्ने उनकै छिमेकी श्याम राना
‘आलु जस्तो गायक’ हिट भएपछी पल शाहले दुर्गेश थापाको यसरि अन्तरबार्ता लिए, ट्रोल हुदाको पि’डा सुनाउदा भाबुक भए(भिडियो)
सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा भएपछि टीका सानुले लेखिन् मनछुने यस्तो स्टाटस् ( पढ्नुहोस् )
भाइरल कल्पना दाहालको पहिलो लोक गित ” कल्पना ” सार्बजनिक ( भिडियो )
प्रकास सपुत र केकी अधिकारीको अभिनयमा बिष्णु माझीको नया गित सार्बजनिक ( भिडियो )
निकिशा श्रेष्ठलाइ छ क्का भन्ने दुइ युवा पक्राउ
गायिका देबी घर्तीले बदला बरिलै गाउदा सारा दर्शकहरुलाई रुवाइन , दशैँ तिहार लाइब प्रकास सपुत ( भिडियो )
सप्तरंगी टिकामा सजिएकी चर्चित गायिका टिका सानुको तिहार यस्तो रह्यो
तिहारको तेस्रोदिन आज : लक्ष्मी पुजा र कुकुर तिहार मनाइँदै
श्रीमानबाट ता’तो तेल खनाईएकी पुजा यस्तो अबस्थामा, आमाले खोलिन् भित्री कुरा
‘ह्याप्पी तिहार २’ मा दुर्गेश थापा र पल साहले खेले देउसी भैलो (भिडियो)
लोकप्रिय गायक पुश्कल शर्मा समाज सेवामा
अस्पतालको लापरबाहीले यस्तो भएको रैछ, सबैले अर्की बिहे गर भन्छन अझैपनि, दिदीले सबै कुरा खोलिन, यस्ती भईन अनिता
पर्यटकिय क्षेत्रमा बिकास हुदै तनहुँको मानुङ्गकोट डाँडा , एक पटक घुमनै पर्ने ठाउँ
बोल माया गाउदा गाउदै रोइन शान्ति श्री परियार , प्रकाश सपुत दशैँ तिहार लाइब ( भिडियो )
धुरुक्कै रुवाउने दशैँ गित ‘ बस पर्खेर ‘ को चौतर्फी चर्चा ( भिडियो )
भाइरल गायिका समिक्षा अधिकारी र नरेश खातीको अर्को नया गित ‘ पिपलु बर ‘ सार्बजनिक ( भिडियो )
अदालतमा आफ्नो प्रेमको बरेमा बोलिन सुष्मा, ६ जनाको ह’त्या बारे दीइन कसैले नसोचेको बयान !
www.naulodhun.com का लागि
फोन नं.: +977-000000
वेब ठेगाना:- www.naulodhun.com
© 2021: नौलो धुन मा सार्वाधिकार सुरक्षित छ | Designed by: GOJI Solution